नयाँ सरकार कहिले ? को बन्ला प्रधानमन्त्री ? – Everest Times News
नयाँ सरकार कहिले ? को बन्ला प्रधानमन्त्री ?
२०७४ पुष १, शनिबार ०९:२२
ऐतिहासिक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट नेकपा एमाले पहिलो दल बनेको छ । कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमालेले ८० स्थानमा विजयी हुदै दोस्रो संविधानसभामा दोस्रो रहेको एमाले यसपटक पहिलो दल बनेको हो । प्रनिधिधि सभाको निर्वाचित स्थान हेर्ने हो भने ३६ स्थानबाट निर्वाचित हुदै माओवादी केन्द्र दोस्रो दल बनेको छ र नेपाली कांग्रेस तेस्रो दल बनेको छ । यद्यपि समानुपातिक मत परिणामले कांग्रेस दोस्रो दल बन्ने देखिएको छ भने माओवादी तेस्रो दल । निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ११ र संघीय समाजवादी फोरम १० स्थानमा विजयी भएका छन् । यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक, नयाँ शक्ति पार्र्टी नेपाल एक, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक र नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक स्थानमा विजयी भएका छन् । स्वतन्त्रतर्फ एक उम्मेदवार पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।
प्रदेशसभामा पनि एमाले नै पहिलो
प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ पनि एमाले पहिलो दल भएको छ । प्रदेशसभाका कुल ३३० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमालेले १७० स्थानमा जित हासिल गरेको छ । माओवादी केन्द्र ७२ स्थानमा विजयी भएको छ भने काँग्रेस ४० स्थानमा विजयी भएको छ । यसैगरी संघीय समाजवादी फोरम २४, राष्ट्रिय जनता पार्टी १६, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल दुई, राष्ट्रिय जनमोर्चा दुई, नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक र स्वतन्त्र उम्मेदवार तीन स्थानमा विजयी भएका छन् ।
यस्तो छ प्रदेशको अवस्था
प्रदेश १ मा एमालेबाट ३६, माओवादीबाट १०, कांग्रेसबाट ८, संघीय समाजवादी फोरमबाट एक र स्वतन्त्र एक गरी ५६ जना निर्वाचित भएका छन् । समानुपातिकबाट ३७ जना प्रतिनिधि छान्न बाँकी रहेको छ ।
प्रदेश २ मा एमालेबाट १४, माओवादीबाट ६, कांग्रेसबाट ८, संघीय समाजवादी फोरमबाट २०, राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट १५ र एकजना स्वतन्त्र निर्वाचित भएका छन् । यहाँ ६४ जना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित र ४३ जना समानुपातिक सदस्य रहनेछन् ।
प्रदेश ३ मा एमालेबाट ४३, माओवादीबाट १४, कांग्रेसबाट ७, नयाँ शक्तिबाट १ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट १ गरी ६६ जना निर्वाचित भएका छन् । अब समानुपातिकबाट ४४ सदस्य छानिने छन् ।
प्रदेश ४ मा एमालेबाट १७, माओवादीबाट ९, कांग्रेसबाट ६, नयाँ शक्तिबाट १, राष्ट्रिय जनमोर्चबाट २ र स्वतन्त्र एक गरी प्रत्यक्षबाट ३६ जना निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिकतर्फ २४ जना सदस्य छानिन बाँकी छ ।
प्रदेश ५ मा एमालेबाट २९, माओवादीबाट १४, कांग्रेसबाट ६, संघीय फोरमबाट ३ गरी प्रत्यक्षतर्फ ५२ सदस्य निर्वाचित भएका छन् । समानुपातिकतर्फ ३५ सदस्य छानिन बाँकी रहेको छ ।
प्रदेश ६ मा एमालेबाट १४, माओवादीबाट ९, कांग्रेसबाट १ गरी प्रत्यक्षतर्फ २४ सदस्य निर्वाचित भएका छन् । समानुपातिकतर्फ १६ सदस्य छानिन बाँकी रहेको छ ।
प्रदेश ७ मा एमालेबाट १७, माओवादीबाट १०, कांग्रेसबाट ४, राजपाबाट १ गरी प्रत्यक्षतर्फ ३२ सदस्य निर्वाचित भएका छन् । समानुपातिकतर्फ २१ जना सदस्य छानिन बाँकी रहेको छ ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुबैमा वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको छ । अझ प्रदेशमा पनि प्रदेश २ बाहेक सम्पूर्ण प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । प्रदेश २ मा समेत संघीय समाजवादी फोरमको साथ पाएमा एमाले सम्मिलित सरकार बन्ने देखिन्छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नयाँ सरकार कहिले भन्ने प्रश्न सबैको हुन थालेको छ । तर, नयाँ सरकार गठन भने संवैधानिक गन्जागोलले अझै दुई महिना लम्बिने देखिन्छ । समानुपातिक सांसद नछानिएसम्म नयाँ सरकार नआउने संविधानविद्हरु बताउँछन् । समानुपातिक सांसद छान्न राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सभा गठनका लागि प्रदेश प्रमुख तोकिनुपर्ने तत्कालको आवश्यकता रहेको संविधानविद्हरुको तर्क छ ।
यसका लागि प्रदेश सभा पूर्ण नभइकन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुदैन ।
त्यसैले पनि नयाँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरु मिल्नुपर्ने र चाँडै नै यो गाँठो फुकाउनुपर्ने निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा बताउँछिन् । शर्मा भन्छिन्, ‘३३५ महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक अनिवार्यता अनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नसकी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको टुंगो लगाउन नसकिने भएकोले राष्ट्रिय सभा ऐन अत्यावश्यक छ । संविधानको धारा ८४ (८) अनुसार यो आवश्यक रहेको उनको दाबी छ । यद्यपि वामपन्थी धारका संविधानविद्हरुले भने नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पर्खनुपर्दैन । यही विषयमा गन्जागोल हुदाँ र यो गाँठो फुकाउनमात्रै दुई महिना लाग्ने देखिन्छ । यसो नभएमा देउवा सरकार थप लम्बिने देखिन्छ ।
को बन्ला प्रधानमन्त्री ?
वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ बहुमत ल्याए पनि प्रधानमन्त्री को भनेर तोकेका छैनन् । निर्वाचनमा निस्केदेखि अहिलेसम्म वाम गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीका रुपमा कसैलाई पनि उभ्याएको छैन । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमध्ये दुइमा एक प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना बलियो रहेको छ ।
यद्यपि एमाले एक्लैले पनि बहुमत ल्याएको र माओवादी तेस्रो दल बनेकोले बीचमा कसैले खेलेमा सरकारको नेतृत्वमा दोस्रो व्यक्ति आउने सम्भावना पनि देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस, राजपा, संघीय समाजवादी मिल्दा पनि बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना देखिएकाले छिमेकी शक्तिहरुले चलखेल गरेमा तत्काल माओवादीका नेता प्रमुख हुने र आलोपालो सरकार चलाउने सम्भावना पनि रहेको छ । तर, पार्टी नै मिल्ने हिसाबले माओवादी एमालेमा गएको हो भने यो सम्भव हुने देखिदैन ।